Nomena ny hoe ny vehivavy any ivelany ny foko dia tsy mora foana ny manao izany. ny zava-misy fa maro ny olona monina ao amin’ny faritra misy azy dia saika voahodidin ny vehivavy avy ny olona. Arakaraka ny toerana misy anao raha ianao no velona, nahita ny iray na ankizivavy roa mba hamita ny asa isan’andro dia mety ho somary sarotra. Izany tsy midika fa tsy azo atao ny mahita tovovavy iray tany korea tamin’ny mahafinaritra sy tsara tarehy izany, ka misaotra anao, ary ireo izay mametraka fifandraisana amin’izy ireo. Midika izany fa ianao dia tsy maintsy hiasa mafy kely mba hahitana fa ny zazavavy dia ny koreana sy ny nofy. Koreana toeram-pivarotana dia mety ho kely avy izay hainao toy ny fandrahoan-tsakafo. Ianao dia angamba tsy tena tsara koreana nahandro, ary raha toy ny ankamaroan’ny tanora. Raha ny tena izy, ianao mety tsy mahalala akory ny fomba nahandro rano iray tavoara monja. Fa raha mitady tovovavy, koreana hatsaran’ny, dia sarotra ny mahita ny iray amin’ny kokoa isaky ny metatra tongotra.
Mahita ny koreana-teny store, mihaja akaiky anao, sy handeha ary hanao ny sasany ny miantsena. Raha toa ianao ka ao anatin’ny traikefa nahafinaritra ny efitra fisakafoana, na dia voafetra ho voaomana ny sakafo, satria tsy fantatro hoe ahoana na izany aza, dia mety mahita ny sasany amin’ireo zavatra izay tena mahaliana ny hanandrana. Raha tsara vintana ianao, dia hahita koa ny mafana koreana tovovavy, ianao ho afaka hampiseho anao ny zavatra roa momba ny mahandro sakafo an-trano, koreana. Cougar Vita dia an-tserasera Mampiaraka toerana izany dia natao ho an’ny koreana ankizilahy sy ankizivavy rehetra amin’ny tanjona mitovy. Fehiny dia ny hoe fihaonana amin’ny mpivarotra, koreana sy ny lafiny rehetra ny toerana hafa ianao dia afaka, fa ny fanaovana izany an-tserasera mora kokoa ho anao. Isan-taona dia mijery sy mampitaha ny tsara indrindra sites mba mahita TOVOVAVY ao KOREA, ary izy ireo dia manana ny tsara indrindra nandritra ny fotoana maromaro. Rehefa sonia ho an’ny Cougar Vita (azonao atao ny manamarin ny fitsarana maimaim-poana eto), dia avy hatrany hifandray amin’ny vehivavy izay mitady ry zalahy tahaka anao. Fantatro koa fa ianao no ao an-tsena ho an’ny vehivavy, ianao dia soa ihany fa tena ho toy ny tanora ny vehivavy sy mipetrapetraka Cougars. Mampiaraka ny ankizivavy, sexy Koreana, eo amin’ny tena fiainana, dia azo antoka fa azo atao, fa ny fampiasana Ny Fiainana Cougar tena hanatsara ny vintana. Raha mitady tovovavy ao koreana, dia antonony ihany ny tovovavy dia misy mitady sakafo ara-poko. Fa ny olona izay tsy mahandro sakafo be dia be, tsy te-handeha ho any amin’ny mpivarotra amin’ny fonony. Toeram-pisakafoanana dia ny toerana lehibe mba hihaona ny vehivavy, indrindra fa raha manana Seza faritra izay matetika ny olona hivondrona taloha sy taorian’ny sakafo hariva. Rehefa mitady ny koreana zazavavy, miezaka mitady kokoa be pitsiny trano fisakafoanana, ny vahoaka dia kely kokoa.
Ny vehivavy mitady mety tsy ho ao afovoan-tanàna
Raha izany no nitranga, dia ho mety ho any amin’ny vondrona iray ny mpinamana, na ny sasany hafa karazana, ary mety tsy ho liana amin’ny miresaka aminao. Tao amin’ny hotely fisotroana, dia ny toerana lehibe ny vehivavy, ary ireo izay manana vola ampy ho lavitra, matetika izy ireo mba hifindra avy. Raha toa ianao ka nitady ny ankizivavy, dia misy ny vintana tsara mba avy ihany ny tsara indrindra rehefa tonga ny fisotroana izay manintona indrindra ny tanora, ary hippies. Rehefa mitady vehivavy koreana nandritra ny fivoriana miezaka ny hanandrana tao amin’ny hotely fisotroana ao amin’ny faritra izay matetika feno vahoaka ny koreana Tatsimo ny olona. Raha mipetraka any amin’ny tanàn-dehibe toy Los Angeles, new York sy Chicago, dia hanao izany. ny trano fandraisam-bahiny bar tokony ho somary mora, ary ao Koreatown izy ireo ihany koa dia tokony ho ny fahombiazana lehibe. Happy hour toerana lehibe ho an ny zatovolahy mba hihaona miasa koreana ankizivavy izay afaka ny ho eo ny mpiambina rehefa ela ny andro tao amin’ny birao. Toy ny tany amin’ny fivarotana, trano fandraisam-bahiny no tokony hitady happy hour any amin’ny faritra izay ny mpanjifa indrindra any Azia, na Korea. Raha toa ianao ka handeha happy hour, ho azo antoka fa vonona ny hividy roa ny zava-pisotro. Manantena aho fa ny molotov ny hariva dia ho hariva, ary ny fivoriana faharoa. Raha mitondra fiara ianao nandritra ny ora sambatra, ho azo antoka ianao vonona ny hividy roa ny zava-pisotro. Manantena aho fa ny molotov ny hariva dia ho hariva, ary ao amin’ny faharoa amin’ny fihaonana. Ny trano fandraisam-bahiny no misy ao amin’ny ampahany manan-danja ny koreana sy kolontsaina any United States. Saingy izany ihany koa ny zavatra izay ny ankamaroan’ny olona dia tokony hanao sy hitandrina azy ireo, mifantoka mandritra ny andro. Ny fivarotana kafe ao amin’ny manodidina ny faritra, ireo Koreana no safidy tsara indrindra. Na dia ny sit-midina fivarotana kafe dia mety tena mitovy ireo izy ireo ampiasaina, ireo no misy ny fahasamihafana lehibe. Ny lehibe indrindra ny maha-samy hafa ny vidiny amin’ny ankapobeny ny avo indrindra, ary avy amin’ny boky, na solosaina findainy, izay tena mampahery. Aza matahotra ny handeha camping amin’ny sasany amin’ireo asa, na amin’ny halavany manontolo ny tantara, ary mihantona avy miaraka amin’ny tsara tarehy ny farany fa handeha amin’ny varavarana ny latte sy cappuccino. Tsy ny rehetra ny tovovavy ao Korea toy ny mandeha miantsena, fa ny fiantsenana foibe hitohy ho toy ny toerana lehibe fivoriana sy fihaonambe. Avokoa ny tanora rehetra mitady tovovavy sy ny koreana tokony ho sisa ao fiantsenana foibe ao amin’ny faritra lehibe Aziatika mponina, na ny fiantsenana foibe dia afaka ihany koa ho hotbed ho an’ny vehivavy. Rehefa naka vehivavy niakatra ho any amin’ny toeram-Pivarotana lehibe, ataovy azo antoka fa ianao aza mandeha any amin’ny fivarotana manao izany noho ny vehivavy rehetra hitanao.
Fara faharatsiny dia te-hanao kely miantsena ho azy ireo
Fivarotam-boky dia tsy afaka ho hita eo amin’ny zorony dalana rehetra toy ny taloha, fa mbola misy, izy dia matetika sahirana ny vehivavy manan-tsaina sy sexy. Rehefa mitady amin’ny teny koreana ny toeram-pivarotana, ny vehivavy mazàna no mandeha miantsena, izany no hevitra noho ny lahatsoratra amin’ny Ankapobeny, ny sit-midina fivarotana, dia mety ho hafahafa kely ho anareo, raha tsy hiteny ny fiteny. Fa tsy, ianao dia afaka mifantoka amin’ny fivarotana izany hanompo ny mpanaraka maro be, ary izay manana iray taonina isan-karazany ny olona amin’ny fotoana nomena. Tsy afaka manome fahafaham-po ankizivavy sasany nipetraka teo hoe ao amin’ny zazavavy iray amin’ny fotoana izay tonga ho amin’ny fivarotam-boky, kanefa ny tena toerana lehibe mba hihaona ny vehivavy. Izany ihany koa dia toa tsy toy ny git izay ihany no mandeha ny mpivady ny vehivavy, satria fivarotam-boky dia mbola cozy ho an’ny rehetra manam-pahaizana sy ny vahoaka izay te-hanatsara ny tenany. Raha mahita ny tenanao ao amin’ny fivarotam-boky (indrindra eo amin’ny lehibe iray mba store fizarana izay aho dia afaka ny hianatra zavatra avy amin’ny boky eo amin’ny talantalana. Tsy te-hiafara miresaka ny koreana sy ny kanto tia, ary raha toa ka mbola tsy mahalala ny ody ny Picasso. Ny fanaovana fanatanjahan-tena dia fomba iray tena mazava ny toerana mba hitsena ny vehivavy, fa ny zava-misy fa ny ankizy dia foana ny mahamenatra. Raha mitady tovovavy ao korea, midira ao, ao ny fanaovana fanatanjahan-tena akaiky izay misy be dia be ny vehivavy koreana, miasa sy mitoetra no safidy tsara. Rehefa ianao no eo akaiky eo foana ny vehivavy sy ny sit-midina ny fanatanjahan-tena milina any amin’ny fanaovana fanatanjahan-tena, ho azo antoka fa izany dia tsy mandroso loatra-miatrika. Maro ireo koreana vehivavy atao fotsiny ve izany ny fanatanjahan-tena tsy manahy. Fanamarihana be kokoa amin’ny teny koreana ny vehivavy amin’ny fanaovana fanatanjahan-tena raha toa ianao ka handeha tsy tapaka, ary miresaka indray mandeha fa tsy nangataka fihaonana tao ny fivoriana voalohany. Toerana ny mozika rehefa miaina ao amin’ny toerana mafana ny fandriana ho an’ny lehilahy sy ny vehivavy izay manirery. Ny zazavavy rehetra any Korea dia angamba koa voasarika bebe kokoa ho toy ny hidy, satria misy zavatra izay raha mifantoka kokoa amin’ny hena-tsena, izay iray amin’ireo alina indrindra-fotoana izao. Mandehana any an-toerana, eo an-toerana ny mozika, ny zavatra izay azonao atao ny tenanao, fa mety ho tsara vintana kokoa noho ny namany. Maro ireo koreana ny vehivavy misafidy ny hiditra vondrona iray, ary raha toa ka tsy manana ny olon-tiany izay no voly Ny namana, Dia mety tsy ho afaka ny hividy vehivavy iray izay mahaliana Anao, na raha toa ianao ka liana amin’ny fanaovana izany. Saika ny olona rehetra tia alika, ary izay ahitana ny ankamaroan’ny ankizivavy any Korea. Raha manana alika, ny famangiana ny alika Zaridaina dia hahatonga anao ny fiaran-dalamby ny alika ianao raha mitady ny lehilahy mba hiresaka. Tanora lehilahy izay te-hitsidika ny alika Park mba hihaona ny vehivavy dia tokony hitady ny toerana izay misy maro ireo vehivavy any Korea. Rehefa dinihina tokoa, ny ankamaroan’ny vehivavy dia miandry anareo ao amin’ny alika Zaridaina akaiky kokoa an-trano. Ao Korea Avaratra, ianao, mety tsy ho tena mety handeha, fa raha ny marina dia nankany Korea Atsimo dia fomba lehibe mba hianatra momba ny kolontsaina sy ny hihaona tsara tarehy koreana ankizivavy manao izany. Ny tena manararaotra nankany Korea Atsimo dia maro ny vehivavy ao amin’ny firenena mipetraka. Midika izany fa ianao dia hanana fahafahana tsara kokoa ny fivoriana ny vehivavy izay mifanaraka ny sitrapony. Mazava ho azy, dia afaka ihany koa ny matoky tsara tarehy mahatahotra travel traikefa. Mandeha amin’ny saina tsy miangatra, ary mandra-pahatongan’izany dia mety mila be dia be kokoa noho ny ankizivavy iray tany korea. I Jason, Andro no mpanoratra izay mandray anjara tsy tapaka, ivelan’ny taona fetra. Izy dia nanampy ny tanora maro ny olona mahita fahombiazana eo amin’ny fifandraisana, ary ankoatra izany, dia maro ireo traikefa nandritra ny taona maro. Mba hanampiana ny olona hanorina fahatokisan-tena sy ny fitiavana noho izany indrindra avy aminao
← Shina Mampiaraka Toerana, maimaim-Poana amin'ny Aterineto Mampiaraka ao Shina, BJ
Fa ny lehilahy koreana - koreana ny olona - lehilahy koreana →